Fikirizan’ny mpitoraka blaogy iray hanampy an’i Baby Kamba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2008 16:02 GMT
Raha miezaka ianao manaraka vaovao momba an'i Madagasikara, dia angamba mamaky matetika ny Madagascar Tribune. Ary raha nanao famandrihana ianao, dia namaky angamba vaovao nosoratan'i Herimanda R momba ny fandidiana tsy dia fanao ary vita soa aman-tsara nataon'ny departemantan'ny neorochirurgie teo amin'ny hopitaly Ravoahangy tamin'ny fahafolon'ny volana Jona. Herintaona i Tombotsara Antefindrazana, fantatra mandrakizay ho “Baby Kamba” ho an'ny mpitoraka blaogy eran-tany, vao teraka izy dia nisy ny “frontal-nasal meningoencephalitis“, izay nahatonga bontsina lehibe nivoaka teo anelanelan'ny masony roa, araky ny hita eto amin'ity sary ity :
Nisy lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Midi Madagasikara nilaza fa hatramin'izay dia vao 37 monja ny olona nisy meningoencephalitis hita tao amin'ny hopitaly Ravoahangy. Fa ny tsy voalazan'ireo lahatsoratra roa ireo kosa dia ny tantara niantombohan'ny fanavotana an'i Kamba : ny ezak'i Diana Chamia, mpitoraka blaogy vao 18 taona fotsiny, nikiry nitady fanampiana ho an'i Kamba tamin'ny alalan'ny lahatsoratra iray niseho tao amin'ny blaoginy ary nitondra ny lohateny hoe “Ampio aho hanampy azy“.
Diana Chamia hita sary miaraka amin'ny Kamba talohan'ny fandidiana, izay vita vokatry ny asa mafy nataon'i Diana.
Diana, mpianatra fanaovana gazety any Mahajanga, Madagasikara, dia nianatra fitorahana blaogy tamin'ny Foko Madagascar, nahazo vatsy tamin'i Rising Voices. Ireo olona hafa mpitoraka blaogy tany Mahajanga dia isan'izany ry Cylnice, Jombilo, Lomelle, Mielmanja, Rondro, Tonkataly, Ysiastella, sy Zouboon.
Mpitoraka blaogy avy amin'ny Foko Blog Club any Mahajanga, io i Diana miakanjo mainty eo afovoany.
Fa i Diana no nanapaka hevitra hampiasa ny blaoginy ho fitaovana fanaovana asa soa sosialy. Araka ny tantarainy ao amin'ny toraka blaogy tamin'ny April 19, dia hitany voalohany i Kamba sy ny reniny izay mpitondra tena, Philomène Georgine, raha variana loatra izy ka nilaozan'ny bisy ‘fitaterana’ .
“Naka ny bisy faha 5 avy any an-trano aho ho any amin'ny Bazar Mahabibo, fa very saina, sa koa angaha efa lahatry ny zaza, ka adinoko ny nidina teo amin'ny fidinako mahazatra. Efa tery amin'ny tranobe an-tanàna aho vao tonga saina. Teo am-piverenana ho any an-tsena, dia nahita ity ramatoa ity aho , mibaby zaza kely iray, mitrotro iray eo aloha, ary kitapo mena lehibe iray eo an-tsaviliny. Ilay zaza trotroiny dia notakonany lamba maitso. Nanontany tena aho hoe maninona no rakofana kanefa mafana be i Mahajanga. Nisy rivotra be, dia hitako ny tarehin'ilay zazakely.”
Dia manohy i Diana mitantara ny fifaneraserany tamin'i Philomène izay miezaka mafy kanefa tsy mahita fika hanaovana ilay fandidiana hanesorana ilay vonto lehibe eo amin'ny handrin'ny zanany. Io andro io i Diana dia nivoady fa hitady izay hanampiana an'i Kamba mba ho zaza toy ny rehetra izy, tsy hojeren'ny mpandalo hafahafa intsony, fijery izay efa lasa nahazatra ny reniny.
Nandritry ny volana vitsy taty aoriana dia nantsoin'i Diana ny mpitoraka blaogy Malagasy maro hanampy azy. FOKO iray manontolo nanampy an'i Diana namorona ny “Zaza sy Vavy Gasy” (“Ho an'ny vehivavy sy zaza Malagasy”), pejy Internet miteny anglisy sy frantsay natao hanaovana fanampiana sy fitadiavana vatsy hanaovana ilay fandidiana lafo be hanesorana ny vonto eo amin'ny handrin'i Kamba. Nisy koa pejy Facebook nakarina tamin'izany.
Ny ezak'i Diana dia voatantara tsara ao amin'i blaogin'i Joan Razafimaharo, miasa ao amin'i Foko, ary koa ao amin'ny fitorahana blaogy iombonana, Malagasy Miray.
Tany Canada, i Jean Razafimandambo, Malagasy mpitady ravinahitra, ary mifanerasera matetika amin'i Mahajanga, dia nijery Internet ny andro nahaterahan'ny zafikeliny, ary nahita ny blaogin'i Diana. Araka ny nolazain-dRazafindambo monina any Ottawa,
Nahatsiaro ny zafikeliko aho, izay salama tokoa, ary raha i Kamba moa no zafikeliko, dia inona no ho ataoko?
Nampian'ny namana, mpiara miasa ary koa olon-tsy fantatra malala tanana sy fo i Jean sy i Bako vadiny ary nahazo efa ho $1500 ho an'ny fandidiana an'i Kamba, raha nanao ny hazakazaka lavitra ezaka tao Ottawa tamin'ny volana May.
sary nindramina tamin'i Avylavitra
Araka ny hitanao ao amin'io sary io, dia miverina tsara ny fahasalaman'i Kamba, indrindra moa fa tena fandidiana henjana (mihoatry ny adiny valo). Ilay fandidiana dia tsy ho nisy mihitsy raha tsy nisy ny fitiavana be sy fikirizan'i Diana. Impiry moa isika no nandalo olona iray mila fanampiana, nefa kosa nanome tsiny fotsiny ny fitondrana hoe tsy ampy ny fitsaboana na koa ny trano omeny hipetrahana? Dia avy eo isika anefa manohy ny lalantsika. Fa i Diana tsy nandalo fotsiny. Blaogy iray fotsiny sy fikirizana no azy, fa kosa nanovàny mandrakizay ny fiainan'ny ankizy lahikely izay fantatr'izao tontolo izao ho Baby Kamba amin'izao fotoana izao. Afaka mihaino mivantana an'i Philomene, renin'i Kamba sy i Diana ianao ao amin'ity video ity.
salut,azafady raha manoratra ity mail ity izaho,lazao hoanahy izay mety azoko hanampiana ianao fa zaho vonona hanome tanana anao @ io zavatra io.Misaotra anao nampita hafatra,ciao buonanotte.MAXIMIN!
20 Aogositra 2008, 23:33
Vaky ny fo mampandre fa namonjy ireo anjely kely maro be toa azy i Kamba anio 19 martsa 2009.
19 Marsa 2009, 14:24
Tena mampalahelo be ilay izy, ary za tsy nahalala an’io
Mivavaka ho an’ny fianakaviana nilaozany no mankahery ny rehetra ihany koa!
27 Marsa 2009, 06:29
Misaotra an’i Diana nanokatra làlana koa ho an’ny Armée du Salut (ny A.S. zanaky ny T.O), ka mbola ahafahanay avy amin’ny A.S manohy ny asa fanohanana sy fikarakarana ny fianakaviana hatramin’izay niverenany tany Mahajanga ka hatramin’izao na dia nilaozan’i Kamba aza, ary araka izay mbola ho tratranay raha eo foana ny fitahian’Andriamanitra.
16 Avrily 2009, 17:31
Mahereza daholo dia misaotra foana. Hoy i Pascale Jeannot izay hoe “je suis contente que “des têtes brûlées” comme moi existent à Madagascar ; ça payent toujours un jour….. ne baissez pas les bras.”
Misaotra ny Armée du Salut nanaiky ho andry iankinan’i Kamba sy ny fianakaviana nilaozany.
Misaotra ny rehetra nanaiky ho fianakaviany araka ny tenin’i Joan.
Aza sasatra ny manao soa !
16 Avrily 2009, 20:20